အကယ်၍ ပြဿနာတခုခု ဖြေရှင်းဘွယ်ရာရှိလျှင် ဗုဒ္ဒဟောကြားခဲ့သည့် လမ်းစဉ်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဒီမိုကရေစီကျကျ စဉ်းစားဆင်ခြင်ရပေသည်.။ ။(နေရူး)
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ဟုပင်ဆိုဆို.မဟုတ်ဟုပင်ပြောပြော. ကွှန်ုပ်သည်.ကမ္ဘာ့ကိုးကွယ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရေးစနစ်အသီးသီးကို လေ့လာဆန်းစစ်ဘူးပါ၏။ သို့သော်..သို့သော်. ဗုဒ္ဒ၏အရိယမဂ္ဂင်(၈)ပါးနှင့်သစ္စာ(၄)ပါးတရားထက် ထူးကဲသာလွန်သည့်လှပစွာခြုံငုံမိသောအရာကို. မည်သည့်ဘာသာဝင်မျှမတွေ့ရှိရချေ. ကွှန်ုပ်အနေနဲ့ ထိုလမ်းစဉ်အတိုင်း မိမိ ဘ၀ကိုပြုပြင် နေထိုင်ရသည်ကိုကျေနပ်နေမိပါသည်။ ။(ပါမောက္ခ ရီးစ်ဒေးဇစ်)
ဗုဒ္ဒဘာသာသည်သိခြင်းမြင်ခြင်းသည်သာလျင် ပဓာနဖြစ်၍ ယုံကြည်ခြင်းငှာအရာမဟုတ်ချေ..
လာ၍ ယုံကြည်လက်ခံပါဟု.မဆိုပေ။ ။(ဒေါက်တာဝါပိုလာ)